Uxwebhu lweFathom kwiNkulumbuso kwiTribeca Film Festival | Ndisuka mac
Uxwebhu lweFathom oluza kuqala kwi-Tribeca Film Festival
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sikuxelele malunga namaxwebhu alandelayo azakufika ngokukodwa kwinkonzo yevidiyo esasaza iApple: Fathom, un Uxwebhu malunga neminenga ethi, kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ikhutshwe kwi-Apple TV +, eya kuthi iboniswe kumnyhadala wefilimu iTribeca.
Lo mnyhadala ubhengeze ukwenziwa kweefilimu kunye namaxwebhu azokuzimasa ukhuphiswano lowama-2021. Ngokungafaniyo nezinye iziganeko zolu hlobo, uCara Cusumano, umlawuli walo mnyhadala nosekela mongameli weenkqubo, wathi umsitho uzakujongana ubuso ngobuso.
Emva konyaka wee-cinema ezivaliweyo, ukudibana okurhoxisiweyo, nayo yonke into ebonakalayo, kungovuyo kunye nethemba lokuba ekugqibeleni simema abantu baseNew York ukuba baphume emakhayeni abo kwaye babuyele kwiimuvi. Igxunyekwe esixekweni uqobo, iTribeca 2021 iya kuzisa amava akhethekileyo escreen kubenzi beefilimu nakubaphulaphuli ngokufanayo, njengoko siphinda sinxibelelana, sicinga kwakhona kwaye siphinda sive ngamava ekwabelwana ngawo kumdlalo bhanyabhanya.
UMnyhadala weFilimu weTribeca Iqhubeka ukusuka nge-9 ukuya kwi-20 kaJuni kwaye ibandakanya iifilimu ezingama-66 kunye namaxwebhu avela kwihlabathi liphela kunye nama-premieres ehlabathi angama-54. Inkqubo yokhetho yenziwe emva kokuhlalutya ngaphezulu kwe-3.000 izihloko. Zonke iifilimu ezaziboniswa inkulumbuso kunyaka ophelileyo ziya kuboniswa kolu hlelo.
UFathom ulandela ibali leenzululwazi ezimbini ezifunda iingoma kunye nonxibelelwano lwentlalo yeminenga. Uxwebhu lulandela uGqirha Ellen Garland kunye noGqr.Michelle Fournet njengoko beqala uhambo olufanayo lokuya kuphando kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba qonda inkcubeko yeminenga kunye nonxibelelwano ukubonisa ukuzibophelela kwenkqubo yesayensi ukufuna iimpendulo kwihlabathi elisingqongileyo.
Uxwebhu lweFathom oluza kuqala kwi-Apple TV + ngoJuni 25 ozayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uxwebhu lweFathom oluza kuqala kwi-Tribeca Film Festival
Uxwebhu luka-1971: Unyaka woMculo utshintshe yonke into, i-premieres kaMeyi 21